धर्म, संस्कृति र समलैंगिकताबारे बहस - Everest Dainik - News from Nepal
धर्म, संस्कृति र समलैंगिकताबारे बहस
भारतको सर्वोच्च अदालतले समलैंगिकतालाई अपराधको सूचीबाट हटाएपछि भारतभरी भारतीय संस्कृति र हिन्दू धर्ममा समलैंगिकताबारे बहस थालिएको छ ।
नेपाल र भारतमा अदालतबाट नै समलैंगिकतालाई कानुनी मान्यता प्राप्त भइसकेको छ । तर धर्मले यसलाई कुन रूपमा लिएको छ? अप्राकृतिक व्यभिचार या पाप अथवा सामान्य यौन व्यवहार?
समलैंगिकता सम्बन्धी बहस हरेकपल्ट दोहोरो मापदण्ड र पाखण्डका कारण निष्कर्षमा नपुगेर नै टुङ्गिने गरेको छ ।
अक्सर तर्क गरिने गरेको छ- सबै जसो धर्महरूमा समलैंगिक सम्बन्धहरूलाई अप्राकृतिक व्यभिचार या पाप मान्ने गरेका छन् । तर भारतमा इसाई मिसनरी र मुसलमान मौलवीहरूको आगमनपूर्व हिन्दूहरू यौनाचारको विषयमा कुण्ठित थिएनन् ।
पौराणिक कालमा फरक यौनिकता
महादेव शिवको एउटा रुप अर्धनारीश्वर पनि हो । यसलाई आजभोलि प्रचलित शब्दावलीमा ‘एंड्रोजीनस सैक्सुअलिटी’को सहज स्वीकृति भन्न सकिन्छ । त्यस्तै पौराणिक आख्यानहरूमा भगवान विष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर माहदेवलाई फकाउनु कुनै पनि भक्तले अप्राकृतिक या अनाचारयुक्त ठान्दैन ।
याे पनि पढ्नुस यौन सम्पर्कको बेला पुरुषहरुबाट हुने ६ गल्तीहरु
त्यस्तै महाभारतका अर्जुनले विराट राजाको दरबारमा बृहन्नला बन्दैमा उनको पुरुषार्थमा प्रश्न उठ्ने गरेको छैन । त्यस्तै शिखण्डीको लिंग परिवर्तन त मानव इतिहासमै यस प्रकारको पहिलो परिकल्पना नै हो । तर यी कुनै पनि प्रसङ्गले सम्बन्धित पात्रको महत्ता कम भएको पाइँदैन ।
भारतीय इतिहासमा गुप्तकाललाई स्वर्ण युग मान्ने गरिएको छ । त्यसै समयावधिमा रचित वात्स्यायनको कामसूत्रमा त नोकरहरू, मालिस गर्नेहरू र कपाल काट्ने नाउहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुरुषहरूको वर्णन नै पाइन्छ र यस्तो प्रकारको सम्बन्धबाट आनन्द प्राप्त गर्ने विशिहरू समेत उल्लेख गरिएका छन् ।
स्त्रैण गुण भएकाहरू अपराधी होइनन्
त्यस्तै स्त्रैण गुण भएका पुरुषहरूलाई पापी या अपराधी मानिएकोप प्रमाण समेत कहीँ भेतिर्को छिन । यहाँसम्म कि स्त्री-स्त्रीबीच पारस्परिक रतिक्रीडाको समेत सहज वर्णन उक्त ग्रन्थमा प्राप्त छ । भारतको खाजुराहो र उडिसामा रहेका मन्दिरहरूमा कुँदिएका मूर्तिहरूमा यो कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस तराई क्षेत्रको महान पर्व छठ सुरु, आज हो 'नहाय-खाय'
मध्य कालमा सखी भाव रहेका परम्पराहरूलाई समलैंगिकताको उत्थान प्रक्रियाको रूपमा लिन सकिन्छ । यसको अर्थ समलैंगिकता इस्लाम र इसाई जस्ता अब्रहमी धर्महरूमा मात्रै वर्जित रहेको छ ।
पश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने पनि इसाई मत प्रसार हुनुपूर्व रोम तथा ग्रीसमा समलैंगिक सम्बन्धहरूलाई सामाजिक स्वीकृति प्राप्त रहेको थियो । यस लतलाई अंग्रेजहरूले ‘ग्रीक लभ’ भन्ने गरेका छन् भने फ्रेन्चहरूले यसलाई ‘भाइस आन्गल्स’ या अंग्रेजी लत भन्ने गर्दछन् ।
प्रख्यात साहित्यकार अस्कर वाइल्ड देखि क्रिस्टोफर इशरवुडसम्मका बेलायती अभिजात्य वर्गका मानिस ‘बेड ब्रेकफास्ट एंड बोय’को खोजीमा मोरक्कोदेखि मलायासम्म भौंतारिने गरेका थिए ।
पाश्चात्य दर्शनलाई नयाँ दिशा दिने मिसेल फुकोले आफ्नो समलैंगिकताबारे कहिले लुकाएनन् । तर पाश्चात्य समाजमा विद्यमान दोहोरो मापदण्ड र पाखण्डका कारण एलन ट्यूरिङ् जस्ता प्रतिभाशाली गणितज्ञ, वैज्ञानिक और कोड ब्रेकरले उत्पीडनपछि आत्महत्या गर्नु परेको थियो ।
ब्रिटेनमा सन् १९६० को दशकमा नै वुल्फेंडन आयोगको प्रतिवेदन मुताबिक ब्रिटेनले समलैंगिकतासम्बन्धी भिक्टोरिया कालको कानुनलाई रद्द गरिदिएको थियो तर भारतले भने अंग्रेज शासकहरूले पहिराई दिएका सिक्रीहरूबाट मुक्त हुने चेष्टा गरेन ।
एकातिर त इसाई धर्मले यसप्रकारको सम्बन्धलाई व्यभिचारको श्रेणीमा राखेको छ भने अर्को तर्फ हालैका दिनहरूमा कयौं चर्चहरूभित्र नाबालकहरू सँग त्यहाँका पुजारीहरूले यौन दुर्व्यवहार गर्ने गरेको खुल्न आएको छ ।
भ्याटिकन सितीबाट पोपले समेत समलिंगीहरू पनि अन्य मानिस सरह इश्वरका सन्तान रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् ।
एक्काइसौँ शताब्दीमा समलैंगिकता कुनै रोग या मानसिक विकृति नभएको कुरा बिस्तारै स्वीकृत हुँदैछ । यस्तोमा कुनै पनि फरक यौन व्यवहार भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका आधारभूत अधिकार उपभोग गर्नबाट वन्चित गर्न सकिदैन ।
ट्याग्स: culture, homosexuality, religion